Faritra Atsimo Andrefana: azo hampiroboroboana ny fizahantany | NewsMada
Faritra Atsimo Andrefana: azo hampiroboroboana ny fizahantany
Manana otrikarena ahafahany mandroso ny faritra Atsimo Andrefana. Ankoatra ny lafiny ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny harena ambanin’ny tany, manana ny lanjany koa any amin’iny faritra iny ny lafiny fizahantany.
Manana morontsiraka lehibe indrindra eto Madagasikara ny faritra Atsimo Andrefana. Eo koa ny zavaboahary sy ny tontolo iainana mampiavaka azy, ahitana biby, zavamaniry ary zavamananaina tsy hita raha tsy any an-toerana. Azo trandrahina amin’ny lafiny fizahantany avokoa ireo lafiny roa lehibe ireo. Nampihena ny fiharian’ireo mpandraharaha sy ny orinasa amin’ny fizahantany anefa ity krizy Covid-19 ity satria tsy tonga ny mpizahatany. Tafiditra ao anatin’ny toerana na faritra telo voalohany (Top 3) ankafizina sy tena tsidihin’ny mpizahatany anefa ny faritra Atsimo Andrefana. Nilaza ny governoran’ny faritra, ny Dr. Ranoelson Edally Tovondrainy, fa maro ny toerana manana ny mampiavaka azy manokana amin’ny lafiny fizahantany, mampalaza ny faritra. Fa ny tsy fantatry ny rehetra, anisan’ny toerana fandalovan’ny trozona, toy ny any Nosy Sainte Marie, koa aty Atsimo Andrefana. Nahita toerana azo anorenana fotodrafitrasa, ahafahana mijery sy mahita ny trozona izahay any Behitsaka sady morontsiraka tena mahafinaritra. Efa saika nanomana foaraben’ny Fizahantany ny faritra, ny volana aogositra teo, saingy tsy tanteraka, vokatry ny krizy Covid- 19.
Nohazavain’ny governora koa fa ataon’ny faritra Atsimo Andrefana laharam-pahamehana ny fanarenana lalana ao an-tampon-tanànan’i Toliara. “Mila ampidirina ao an-tsain’ny tanora eto Toliara koa ny fananana toe-tsaina mahay mandraharaha hisian’ny famoronana asa”, hoy ihany izy.
Na izany aza, ataon’ny governora Dr. Ranoelson Edally Tovondrainy fanamby ny tsy ho faritra tara indrindra amin’ny fampandrosoana, “fasan’ny tetikasa”, toy ny nataon’ny mpitondra telo iny faritra iny. Haverinay ato anatin’ny herintaona ny lazan’Atsimo Andrefana.
Fambolena, fiompiana, fanodinam-bokatra…
Manampy ireo, efa fantatra hatramin’izay ny lazan’Atsimo Andrefana amin’ny lafiny toekarena samihafa, toy ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny harena an-kibon’ny tany, sns. Nampihena ny fiompiana anefa ny asan-dahalo sy ny aretina mpahazo ny biby ka mila vahaolana maika ny lafiny tsy fandriampahalemana. Sahirana ny mponina amin’ny tsy fahampian’ny rotsak’orana sy ny tsy fisian’ny rano ka tsy afa-mamboly. Manan-karena anefa iny faritra iny amin’ny fambolena voanjo, mangahazo, katsaka, hasy, fary, sns.
Nilaza ny governora fa tsy ampy ny rano aty atsimo nefa renirano dimy lehibe no mandalo aty. Vahaolana narosony ny hanitarana ny fananganana fotodradfitrasa toy ny tohodrano hanondraka ny velaran-tany jarina.
Ankoatra izany, manomboka hita ny fivoaran’ny fanodinana ny karazana zavamaniry havadika ho tsiranoka alikaola (gel hydro alcoolique), ilaina amin’ny fidiovana amin’izao aretina Coronavirus izao. Anisan’izany ny mangahazo, ny kabaro, ny sns. Efa eo am-panombohana azy koa ny tetikasa fiompiana biby miraoka ahitra, ny osy sy ny ondry any Toliara II. Manodidina ny 30 ny mpandraharaha tsy miankina misehatra amin’izany.